သီတဂူဆရာတော်ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံကို တရားဟော/ အလှူခံဖို့ လာရောက်လိမ့်မယ် သီတဂူမှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်များအပေါ် စော်ကားပြောဆိုခဲ့မှုများ/လိမ်ညာခဲ့မှုများ တို့ ကို ဖြေရှင်းချက် တောင်းခြင်း- တရားဝင် ပြုလုပ်သင့်ပါသည် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အေးချမ်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သီလယူ ဘုရားစာရွတ်ရမဲ့ နေရာကို ဖရုသဝါစာတွေ အစားထိုးသွားခဲ့တယ်…
ရခိုင်နိုင်ငံရေး၊ တော်လှန်ရေး ဖြတ်သန်းဖြစ်တည်မှု အထင်ကရ သမိုင်းခုနှစ်များ »
သီတဂူဆရာတော်ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံကို တရားဟော/ အလှူခံဖို့ လာရောက်လိမ့်မယ် သီတဂူမှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်များအပေါ် စော်ကားပြောဆိုခဲ့မှုများ/လိမ်ညာခဲ့မှုများ တို့ ကို ဖြေရှင်းချက် တောင်းခြင်း- တရားဝင် ပြုလုပ်သင့်ပါသည်
မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ ရိုဟင်ဂျာညီနောင်များ
မြန်မာမွတ်စလင်နှင့် အခြားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ခင်ဗျား-
မကြာမှီ အချိန်အတောအတွင်းမှာ သီတဂူဆရာတော်ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံကို တရားဟော/ အလှူခံဖို့ လာရောက်လိမ့်မယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်-
အခုလို မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်း လာရောက်စဉ်မှာ
သီတဂူမှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်များအပေါ် စော်ကားပြောဆိုခဲ့မှုများ/လိမ်ညာခဲ့မှုများ
မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် ကမ္ဘ္ဘာ့သမိုင်းတို့ ကို လိမ်ညာပြောဆို၍ အစ္စလာမ်သာသနာအပေါ် မဟုတ်မမှန် စွတ်စွဲပြောဆိုခဲ့ မှုများကို
သီတဂူ သို့ ရှင်းလင်းပြခြင်း/ သီတဂူထံမှ ဖြေရှင်းချက် တောင်းခြင်း-တို့ ကို တရားဝင် ပြုလုပ်သင့်ပါသည်-
သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းများ- သို့ တင်ပြပြီး
တရားဝင် သတင်းမီဒီယာများ၏ရှေ့မှောက်တွင် အခန်းအနားကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် သီတဂူအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ နှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်း စီစဉ် ထားသင့်ပါကြောင်း တင်ပြပါသည်။
This entry was posted on March 5, 2015 at 6:33 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.